Wasiirkii Gaashaandhigga Dowladdii Somalia oo ku Geeriyooday Isbitaal ku yaalla Minneapolis | Gaaloos.com
Home » News » Wasiirkii Gaashaandhigga Dowladdii Somalia oo ku Geeriyooday Isbitaal ku yaalla Minneapolis
Wasiirkii Gaashaandhigga Dowladdii Somalia oo ku Geeriyooday Isbitaal ku yaalla Minneapolis
Allaha u naxariistee, waxaa shalay ku Geeryooday Isbitaal ku yaalla Koonfurta Minneapolis, Minnesota - Wasiirkii hore ee Gaanshaandhiga Somalia, Xuseen Sheekh C/raxmaan (Mataan).
Marxuumka, ayaa ku dhashay Magaalada Awaare, Sannadkii 1941, Wuxuuna isagoo yar u soo wareegay Muqdisho. Waxbarashadiisii Dugsiga Dhexe/Sare, wuxuu ku dhammeystay Muqdisho sannadkii 1964-kii.
Taariikhdii Waxbarasho ee Marxuumka;
• 1965-kii, ayuu waxbarasho u aaday Dalka Ciraaq, Wuxuuna ku biiray Baqdad University College of Law, halkaasoo uu kasoo Qalin-jabiyay 1969-kii.
• 1970 – 1974-kii, Wuxuu ahaa Guddoomiyaha Maxkamadda Gobalka Banaadir.
• 1974 – 1975-kii, Wuxuu ahaa Guddoomiyaha Maxkamada Racfaanka ee gobalka Mudug.
• 1976 – 1977-kii, Wuxuu ahaa Guddoomiyaha Gobalka Sanaag.
• 1978 – 1988-kii, Wuxuu ahaa Xeer-ilaaliyaha Guud (Attorney General) ee Somalia.
• 1989 – 1990-kii, Wuxuu ahaa Wasiirka Gaashaandhigga Somalia, isagoo ahaa Wasiirkii ugu horreeyey ee Shacab ah oo xilka Wasaraddda Gaashaandhigga Soomaaliya loo dhiibo, iyadoo 21-kii Oktoobar 1969, loo xil saaray inuu Dhex-dhexaadiyo Dowladda iyo ururradii Mucaaradka ahaa, sidaan kasooo xigannay Qoyskiisa.
• 1991-kii Illaa burburkii Dowladdii hore, Wuxuu ahaa Wasiirka Cadaalada iyo Garsoorka Somalia. Burburkii kaddibna, wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka, Gaar ahaan Magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota.
Dhanka kale, Wasiirkii Hore ee Gaashaandhigga Somalia Xuseen Sh. C/raxmaan Allaha u naxariistee, wuxuu ahaa oday aad looga qadariyo gobolka Minnesota, isla markaana wuxuu shaqeyn jiray Wanaaga, midnimada iyo Soomaalinimada, isagoo kaalin muuqata kaga jiray dadkii uu la noolaa, wuxuuna ahaa ruux cibaado badan. is-dhawr, aadna u af-gaabn.
Marxuumku, Wuxuu ifka uga tagay Xaas iyo Lix Carruur ah oo uu dhalay, Waxaayna kala yihiin saddex Wiil iyo seddex Gabdhood iyo carruur ay sii dhaleen.
Ugu dambeyn, waxaan taariikh nolaleedka wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Somalia kasoo xigannay Rashiid Xasan (Juxa) oo ay qaraabo yihiin; Iyadoo Shacabkii uu la noolaa ay tebi doonaan marxuum Xuseen Sheekh C/raxmaan.
Title: Wasiirkii Gaashaandhigga Dowladdii Somalia oo ku Geeriyooday Isbitaal ku yaalla Minneapolis